Shiinaha warshadda maaskaro ilaalinta ee la tuuri karo iyo soo saarayaasha | SUREZEN
2. Inta badan shaandheeya waxyaalaha hawada ku jira, xannibaya dhibcaha, dhiigga, dheecaannada jidhka, dheecaanka, iwm.
4. Badeecaddu ma samaynayso qurxin aan micne lahayn, waji-xirfadeed maaskarada ka-hortagga dhibcaha ah, shaqo-qabasho iyo ilaalin ah ayaa nolosha ka dhigaysa mid caafimaad qabta.
5. Qalabka wax soo saarku waa dhalaalaan dharka la afuufay, maqaarka oo aan fiicnayn ee maqaarka leh, sifeynta waxtarka sare, V-qaabeynta qaabka, oo ku habboon dad badan oo wajiyo badan leh.
Alaabtaan waxaa nadiifiyay macdanta 'ethylene oxide' waxayna ku habboon tahay shaqaalaha caafimaadka iyo shaqaalaha la xiriira, isbitaalada, iskuulada, unugyada, suuqyada laga dukaameysto iyo meelaha caamka ah.
Badeecadani waxay qaadatay seddex lakab sifeyn. Nidaamyada wax soo saarka ugu muhiimsan waxaa ka mid ah dhalaal-duuf, miiqda-xidhantu, hawo kulul ama feedho feedho, iwm. Waxay leedahay shaqo u dhiganta oo ah iska caabbinta dareerayaasha, shaandhaynta qaybaha iyo bakteeriyada. Waa dhar ilaalin caafimaad.
Aqoonsiyada oo dhameystiran, alaabada waa la damaanad qaaday, maro meltblown miiraha seddex lakab + heerka ilaalinta dharka aan tolneyn ayaa sareeya, shaqada iyo iskuulka ayaa aadaya, had iyo jeer waardiye, qaab xagaaga qaaska ah, iftiin iyo neefsasho, Wajaha wajiga, ma furmayo, iska caabin hoose , ma haayo neefta, xargaha dhegaha oo balaastik ah oo fidsan, oo raaxo leh in la xidho oo ha dhegaysan dhegaha.
heerka amniga: 0469-2011 maaskaro qalliin caafimaad magaca sheyga: Maaskaro ilaalin caafimaad oo la tuuri karo
Maaskarada ilaalinta caafimaadka ee la tuuro